Indlu yaseBorneo Orchard enemibono emihle yentlambo - I-Airbnb
Indlu yaseBorneo Orchard enemibono emihle yentlambo
Wamkelekile kwiBig Guesthouse (elawulwa yiBorneo Orchard House); ikhaya lakho leeholide ezithandekayo kwiinduli zeTamparuli, ejikelezwe yihlathi lesibini elinemvula kunye negadi yeziqhamo yaseDurian enembonakalo entle ejonge kwintlambo yaseKiulu.
Wonwabele umhlaba wethu "Go-un" (uthetha inkungu ngolwimi lwaseDusun) Uyilo olulula oluvulekileyo lweNdawo yeeNdwendwe Enkulu izisa imbonakalo, izandi kunye nokuphola kwehlathi elingqongileyo. Kwakunokubanda ngobusuku bemvula! Indawo yethu iphakathi kwesixeko saseKK kunye neKundasang.
Sikhethe ukuhlala kwaye sabelane ngendawo yethu njengoko iyi-Sabah yasemaphandleni eyiyo yokwenyani. Kuthe cwaka ebusuku apha, akukho zibane zasedolophini kwaye kukho ingxolo ephazamisayo. Isetingi yethu yasemaphandleni ikunceda ukuba usondele kwindalo, ube namava okuhlambela ngaphandle okanye ungene kwindawo yokuntywila emanzini.
Ummelwane wethu okufutshane uphantsi kwenduli malunga ne-2km kude kwaye ubona kuphela izibane zendlu ezikude kwintlambo yaseKiulu ngaphaya kwethu. I-Tamparuli yeyona dolophu ikufutshane, umlambo i-Kiulu uhamba kuyo kunye nebhulorho entle enqamlezileyo. Jonga ngokusondeleyo kwaye ungayibona ipropathi yethu kwiinduli ezingentla ukuba ume embindini webhulorho. NgoLwesithathu lusuku lwemarike eTamparuli, ngumboniso omibalabala onabantu basekhaya abathengisa yonke into kunye nantoni na....kufanelekile utyelelo lwasekuseni.
Idolophana ekufutshane iKampung Kiwoi yindlu encinci esasazeke ecaleni kweenduli. Uninzi lwabemi baselalini ngabachwethezi berabha, nangona isizukulwana esitsha sisebenza esixekweni. Ngaphezulu kwendlela ukusuka kuthi yiKampung Lingga, enesikolo samabanga aphantsi esihle esithe thaa endulini sinemibono encomekayo. Indlela ke ijika ihle enye i-5km okanye ukuya kwindawo efileyo emlanjeni, i-Kampung Bambangan ilapha encinci, kodwa intle kakhulu phakathi kweenduli, imilambo kunye nomlambo.
Siyavuya ukunceda ngolwazi kunye neengxoxo, njengoko sihlala kwindawo sihlala silapha. Ukutsho njalo, indawo inkulu ngokwaneleyo ukuba ibucala yomntu wonke kwaye singathanda ukuba wonwabele ixesha lakho xa ukhetha ukwenza njalo. Ukufika kwethu siya kukubonisa kancinci kwaye unganqweneli ukusibona kude kube lusuku olulandelayo?! sikunika inombolo yethu yefowuni ukuba kukho imfuneko.
Siyavuya ukunceda ngolwazi kunye neengxoxo, njengoko sihlala kwindawo sihlala silapha. Ukutsho njalo, indawo inkulu ngokwaneleyo ukuba ibucala yomntu wonke kwaye singathanda ukuba…
Iilwimi: 中文 (简体), Melayu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tamparuli